Izindaba - Ukuthuthukiswa komkhakha wamakhebuli waseChina kusuka esikhathini esinejubane elikhulu ukuya enkathini ezinzile
Ukuthuthukiswa komkhakha wekhebula waseChina kusuka esikhathini esinejubane ukuya esikhathini esizinzile
Umkhakha wocingo nentambo imboni ebalulekile esekelayo ekwakhiweni komnotho waseChina. Inikezela ngengqalasizinda embonini yamandla nezimboni zokuxhumana, kubalwa ikota yenani lokukhipha kwemboni kagesi yaseChina. Yimboni yesibili ngobukhulu embonini yemishini ngemuva komkhakha wezimoto, futhi ibamba iqhaza elibalulekile emnothweni wezwe. Ngokwamukelwa kwenqubomgomo yakamuva “yokukhula okuzinzile nokulungiswa kwesakhiwo”, izinga lokukhula komnotho lizokwehla uma liqhathaniswa nesikhathi esedlule, kodwa ukulungiswa kwesakhiwo kuyasiza ekuthuthukisweni kwesikhathi eside futhi kuyindlela edingekayo yentuthuko yaseChina. Kwikota yokuqala yonyaka wezi-2014, ukukhula komhlaba kwehle kakhulu kunokulindelekile, kanti izinga lokukhula ngonyaka lehle lafika ku-2.75% lisuka ku-3.75% engxenyeni yesibili yonyaka wezi-2013. Naphezu kokusebenza komnotho obekulindelekile kunamanye amazwe (eJapan kanye naseJalimane ISpain ne-UK), ukukhula kwehlile ngenxa yobuthakathaka jikelele bomnotho womhlaba.
Phakathi kwazo, isizathu esiyinhloko sokwehla kokukhula komnotho emhlabeni jikelele ukulungiswa kwe-United States neChina, okuyiminotho emikhulu emibili emhlabeni. E-United States, ukuqoqwa kwempahla ngokweqile ekupheleni konyaka wezi-2013 kudlule okulindelwe, okuholele ekulungisweni okunamandla. Isidingo saphinde saphazanyiswa ubusika obunzima, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwehla kakhulu ngemuva kokukhula okunamandla kwikota yesine kanye nokuthengwa kwenkontileka kwikota yokuqala yowezi-2014. womkhakha wezezakhiwo. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wezomnotho kwezinye izimakethe ezisafufusa, njengeRussia, wehle kakhulu, njengoba ukungezwani kwezepolitiki esifundeni kwanciphisa ukufunwa.
Engxenyeni yesibili yalo nyaka, iChina yamukele izinqubomgomo nezinyathelo ezisebenzayo nezisetshenzisiwe zokuxhasa imisebenzi yezomnotho, kufaka phakathi ukukhululwa kwentela yamabhizinisi amancane naphakathi, ukusheshiswa kwezindleko zezimali nezingqalasizinda, kanye nokuqondiswa kokulungiswa komhlaba ongaphansi komhlaba. Ukukhula kulindeleke ukuthi kube ngu-7.4% ngonyaka wezi-2014. Ngonyaka ozayo, i-GDP kulindeleke ukuthi ibe ngu-7.1% njengoba umnotho ushintshela endleleni yokukhula esimeme ngokwengeziwe futhi wehla ngokuqhubekayo.
Imboni yezintambo yaseChina ithintekile ngenxa yokuvilapha kwentuthuko yezomnotho, kanti ne-GDP yasekhaya nayo yehliswe yaya ku-7.4% isuka ku-7.5% obekulindelwe ekuqaleni konyaka. Ukukhula komkhakha wamakhebuli ngo-2014 kuzokwehla kancane kunalokho konyaka odlule. Ngokwezibalo zakamuva zeNational Bureau of Statistics, imali engenayo enkulu yebhizinisi lezimboni nezintambo (ngaphandle kwe-fiber optical nekhebula) inyuke ngo-5.97% unyaka nonyaka kusuka ngoJanuwari kuya kuJulayi 2014, kanti inzuzo isiyonke inyuke ngo-13.98 % unyaka ngonyaka. Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi, inani lokungeniswa kwezintambo nezintambo lehle ngo-5.44% unyaka nonyaka, kanti inani lokuthekelisa lenyuka ngo-17.85% unyaka nonyaka.
Imboni yezintambo yaseChina nayo ingene esikhathini esizinzile sentuthuko kusuka esikhathini sokuthuthuka esinejubane elikhulu. Ngalesi sikhathi, imboni yekhebula kufanele futhi ilandele ijubane lezikhathi, isheshise ukulungisa ukwakheka komkhiqizo ngaphakathi kwemboni, ukuqedwa kwamandla okukhiqiza emuva, futhi iqhube ukuthuthukiswa kwemboni ngezinto ezintsha, ukuze isuke enkulu izwe elikhiqiza izintambo emandleni okukhiqiza.